वकिलमार्फत इच्छाराजलाई छुटाउन न्यायाधीश राजकुमारलाई दुई करोड घुस ! :: ज्योति दैनिक न्यूज :: वकिलमार्फत इच्छाराजलाई छुटाउन न्यायाधीश राजकुमारलाई दुई करोड घुस !
वकिलमार्फत इच्छाराजलाई छुटाउन न्यायाधीश राजकुमारलाई दुई करोड घुस !
बुधबार, असार ८, २०७९ ज्योति दैनिक न्यूज
काठमाडौं / ठगी गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन वकिल र न्यायाधीशबीच मोल–मोलाइ भएको अडियो बाहिरिएको छ । तामाङलाई छुटाउनका लागि वि सं २०७८ पुसमा वकिल र न्यायाधीशबीच भएको उक्त संवाद न्यूज २४ को ‘सिधा कुरा जनतासँग‘ले सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि, उनीहरू तामाङलाई छुटाउन भने सफल भएनन् ।
सार्वजनिक भएको १० मिनेटको अडियोमा वकिल वकिल रुद्र प्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच मोलमोलाइ भएको सुन्न सकिन्छ । अडियोमा वकिल पोखरेलले इच्छाराजलाई १० करोड रूपैयाँ धरौटीमा छुटाउन प्रस्ताव गर्ने र काम मिलाएबापत आफूले दुई करोड रूपैयाँ दाबी गर्ने बताएका छन् । सुरुमा न्यायाधीश कोइराला घुस लिएर आरोपी तामाङलाई छुटाउन अन्कनाएका छन् । उनले मिडिया र सर्वसाधारणको डर मानेका छन् ।
घुस लिन सुरुमा असहजजस्तो मानिरहेका न्यायाधीश कोइरालालाई उनी बारम्बार भनिरहन्छन्, ‘यस्तो मौका सधैंआउँदैन । अरू मान्छे कति गरेर बसेका छन् ।’ यो काम फत्ते गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग पनि भेटको लागि समय मिलाइदिने भन्दै पौडेल लबिङमा लागिपरेका छन् । सार्वजनिक अडियोमा कतै अनुरोध, आग्रह सुनिन्छ भने कतैकतै घुर्की । एक ठाउँमा उनले भनेका छन्, ‘तपाईंले गर्दै नगर्ने हो भने मेरो वचन खेर फाल्न मात्रै किन जानु ?’
न्यायाधीश कोइरालालाई मनाउनका लागि पोखरेलले तामाङविरुद्ध बनेको अभियोगपत्र नै कमजोर भएको सुनाएका छन् । कमजोर अभियोगपत्रविरुद्धमा फैसला गर्दा कसैले पनि सेटिङको शंका नगर्ने उनको तर्क छ । ‘त्यो अभियोगपत्र हेर्दा कुनचाहिँ माइकालालले पैसा खाएर यत्ति गर्यो भनेर पत्याउँछ ?,’ पोखरेलले संकोच मानिरहेका न्यायाधीशलाई कन्भिन्स गर्दै भनेका छन् । न्यायाधीश कोइरालालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्दै उनी भन्छन्, ‘सहकारी ऐनबमोजिम सबै कसुर स्थापित गरेर ल्याएको थियो भने हजुरलाई अलिकति अप्ठेरो हुन्थ्यो । किनभने, त्यहाँ ऐनका सबै कुराहरु हुन्थे । केही गरेर ठग नै नठहरिने कुरामा मान्छेलाई थुन्न हुन्छ त हजुर ?’
पोखरेलको प्रस्तावबाट लालायित तर कारबाही र बदनामीको भागिदार हुने त्रासमा रहेका न्यायाधीश न्यायाधीश कोइरालालाई वकिल पोखरेलले प्रधानन्यायाधिश नै भेटेर सेटिङ मिलाउने ढाडस दिन्छन् । त्यसपछि बल्ल न्यायाधीश कोइराला घुस लिएर तामाङलाई छुटाउने फैसला गरिदिन राजी हुन्छन् । यो संवादले न्यायालयको नेतृत्वले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टअनुसार न्याया सम्पादन गर्न न्यायाधीशलाई निर्देशन दिने गरेको संकेत गरेको छ । न्यायाधीश कोइरालाले संवादका क्रममा पटक-पटक प्रधानन्यायाधीशबाट ग्रिन सिग्नल सायद यही कारण खोजेका हुनसक्छन् ।
तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन गत वर्षको पुसमा विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सिभिल ग्रूपका पूर्वअध्यक्ष तामाङसहितका प्रतिवादीहरूलाई ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेको थियो । सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सिआइबीले असोज १८ गते तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । तामाङ दोस्रो संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट सांसदसमेत थिए । साभार : नेपालवाच
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९ १३:०७